Traffic ihama, Ndine Zvakakwana | Martech Zone
Traffic ihama, ndine zvakakwana
Svondo, Kurume 1, 2009 Chishanu, June 20, 2014 Douglas Karr
Kuwedzera traffic. Wese munhu anoita kunge ane hanya nekutora zvirimo kunze uko kunzvimbo zhinji nekutsvaga kwavanogona. Kune bhizinesi, zvinogara zvichitonhorera kuti uwane kuzivikanwa kwenyika kana kwedunhu uko kunowana imwe kufarira kuyerera mukambani yako. Ndiyo chaiyo traffic, zvakadaro?
Kushanda muindasitiri yePepanhau kwakandipa kutaridzika kunonakidza kwekutsvaga kusinganzwisisike kwemamwe maziso eziso. Mapepanhau mazhinji anoramba achidzikisa (uye kudzikisira) pepanhau ravo kungo chengetedza mitengo yepamusoro yekushambadzira ine huwandu hwevanhu vanoona. Izvi zvakaenda mukunyanyisa - sekuverenga kuverenga kuverenga pamakopi akabiwa epepanhau (hongu, zvakatenderwa neAudit Bureau of Circulations).
Kuverenga Kwangu Kwakatsiga
Kuverenga pane yangu saiti kwave neayo kumusoro uye pasi, asi zvakadzikama. Pakati pevhiki, ini ndinoverengera vangangoita chiuru vaverengi zvakananga, vangangoita zviuru zviviri RSS uye imwe zana + neemail. Tichifunga nezve chokwadi chekuti ini ndinonyora zvakawanda nezve Indianapolis uye nhaurwa yakamanikana yekushambadzira kwepamhepo - inosanganiswa neni kuve munhu-mumwe, shopu yenguva-yekupedzisira - ndinodada neaya manhamba.
Nharaunda, iyo blog yakandipa yakawanda yekuratidzwa. Ini ndinotenda ndinoremekedzwa chaizvo nekuda kwekushanda nesimba kwandakaita, zvese pa blog uye nekubatsira makambani. Ini ndinowana toni yekukoka kofi nemisangano - yakawanda zvekuti handiwanzo kuwanikwa uye dzimwe nguva inoshatirisa avo vari kuedza kundibata. Ini zvakare ndinowana zvakakwana zvekuita zvekuita zvandiri kushanda zvakanyanya pa 'kugadzirisa' hurukuro dzangu uye kugadzirisa pane yavo yekuendesa.
The nhamba ye ziso iyo inotora mubhurogu yangu inodarika zviwanikwa zvandinofanira kuendesa paneese chikumbiro. Ini ndaisakwanisa kufungidzira kuverenga kwangu kwakapetwa kaviri uye kuti zvingakanganisa sei hupenyu hwangu. Ini ndatove kushanda maawa akawandisa uye ndinonzwa sekunge kuti handipedze yakawanda yemhando nguva nenguva nemhuri yangu sezvandaizoda.
Sezvaunotarisa kune kuti kambani yako ichawedzera sei vhoriyamu yevaverengi uye traffic, iwe unofanirwa kuzvibvunza iwe, "Zvakadii zvakakwana?". Ko kana iwe ukapeta vaverengi vako zvakapetwa kaviri? Mangani mamwe mapoinzi angaiswa mupombi yako? Bhizinesi rako raigona kuzvibata here? Mabhizinesi mazhinji haana kugadzirira kuyera. Vamwe vanoita zvakanaka chaizvo ne zvakakwana traffic kubhadhara vashandi uye varidzi nemubhadharo wakavimbika.
Haisi nguva dzose nezve mamwe mboni dzemaziso, dzimwe nguva ingori iyo maziso eziso kurudyi. Zvinotungamira zvinotungamira ndizvo zvakakosha.
Tags: bhizinesi chimirocazoomiyemuno seoweird al yankovich
Vhidhiyo: Maitiro Ekubuditsa Yako Blog pa Twitter
Mar 1, 2009 pa 2: 43 PM
Ini ndinofungidzira zvinogara zvichienderana nerudzi rwesaiti yaunomhanya. Kwandiri, traffic yakawanda yakaenzana nemari zhinji. Ivo vane hukama hwakanangana.
Kana iwe uine 4 kana 5 ad ad ads anomhanya kushambadzira kweCPM, zvinogona kureva imwezve $ 300 kana $ 400 muhomwe yako pakupera kwezuva .. wedzera izvi tenga 365 .. uye iwe uwane mari yakawanda kwazvo 🙂
Mar 2, 2009 pa 11: 18 AM
Ichokwadi kwazvo, maGeeks! Yangu blog ndeimwe yeaya 'akasanganiswa' mablog ayo ese ari maviri kuburitswa uye chaicho chiratidzo chekubvunza uye kutaura. Dai raingova bhuku, ndingadai ndiri kusundira hamvuropu pakuedza kuwana vaverengi vakawanda sezvandaigona.
Mar 2, 2009 pa 3: 11 PM
Uri kutonga sei zvakakosha? Ini handibvunze kuti kuve nekuremekedza zvachose, btw.
Ndiri kureva… sei? Unogona kuona panobva zvimwe zvekutungamira… ndipo pekutanga. Unogona kuona kana vanhu vachitaura… imwe poindi yedata. Unogona kutonga vhoriyamu yeemail iwe yaunosvika ku "batanidza" kana kutaura… .asi ndezvipi zvimwe zvinhu zvaunoshandisa kutonga vaverengi vanoverengera?
Mukupedzisira, 1000, 2000, 10,000 nezvimwewo iwe unoziva sei kuti yako "SHAZAM" inovhenekera yakajeka seyaSeth Godin? Vanhu vazhinji vanoziva Paris Hilton kupfuura Angelica Huston, asi ini ndoziva iyo yandinoda kuona mune bhaisikopo.
Zvinounza mundangariro kwandiri iyo michina yekare yawaimboona mumabhawa "Bata pano kuti uone kuti uri mudiwa worudzii?"… Munhu wese aiziva kuti yaingova nzira yekuba masendi ako makumi mashanu, asi nehwahwa hwakaringana, vanhu vaimhara kumusoro kushandisa muchina.
Wakave mubvunzo munhu wese aida kuziva mhinduro yawo, uye mumwe usina muchina wakambokwanisa kutonga, saka chishuwo chemhinduro pamusoro-kutasva chikonzero uye ndiri kuyedza kusaendako nekuedza kwangu pachega kublogi.